Wararka - Warshadaha iftiinka waddooyinka qoraxda ayaa mar kale “onkod qarxiya”, sirta ka dambaysa baytariga
Sanadihii la soo dhaafay, tamarta qorraxda ayaa si xawli ah u kobcday waxayna ku fidday meelo kala duwan, taas oo ay ugu wacan tahay hoos u dhac ku yimid qiimaha unugyada qoraxdaiyo kaydinta tamarta. Iyada oo qayb muhiim ah ka ah alaabta tamarta cadceeda, dhimista qiimaha unugyada cadceedda waxay kor u qaadaa horumarinta degdegga ah ee warshadaha tamarta qoraxda. Marka la eego horumarka guud ee warshadaha nalalka cadceeda ee waddooyinka dalkeyga, hay'adaha qaarkood waxay saadaalinayaan in wax -soo -saarka warshadaha oo dhan la filayo inuu noqdo qiyaastii 20.25 milyan marka la gaaro 2020. Sannadka 2020, awoodda suuqa ee nalalka waddada cadceedda ayaa gaari doonta 60 bilyan oo yuan.
Nalalka cadceeddawaa inay yeelataa horumar ka wanaagsan; laakiin dhibaatada nolosha batteriga ee baabuurta tamarta cusub, baytariyo badan ayaa la tirtiray. Marka laga hadlayo siyaasadaha iyo qawaaniinta qaranka ee aan caadiga ahayn iyo adeegsiga aan qaangaarka ahayn ee tikniyoolajiyadda adeegsiga echelon, soo-saareyaal badan si ay awood ugu yeeshaan inay la tacaalaan baytariyadaas waxaa lagula macaamilaa qiimo jaban, ama xitaa waxaa lagu iibiyaa tan, sidaa darteed qiimuhu aad buu u sarreeyaa hooseeyo, iyo kharashyada qaarkood waxay u dhexeeyaan 1/5-1/10 baytariyada caadiga ah. Intee bay baytariyadaasi socon karaan? Iibiyeyaashu ma laha gun. Sidaa darteed, alaabooyinkan laftooda lama dammaanad qaado, iyo sababta oo ah qaar badan oo ka mid ah waa macaamil lacageed, ma jirto dammaanad ka dib marka macaamilku dhammaado.
Walxaha kiimikada ee ugu muhiimsan batterigu waxay ka kooban yihiin koronto -wanaagsan iyo koronto -yaqaaniyaha kala -sooca elektaroonka xun, iwm; iyo agabyadan laftooduba waxay leeyihiin meerto nololeed. Tusaale ahaan u soo qaad fosfooraska birta lithium, nolosha meertadu waxay gaadhi kartaa 2000 jeer, si marka tirada wareegyadu u korodho, walxaha kiimikada ah ee ku jira Isbeddellada ayaa dhacaya, taasoo ka dhigaysa wareegga nolosha oo dhan mid aan la hubin. Qaado taksi koronto oo saafi ah Shenzhen tusaale ahaan. Tifaftiraha wuxuu la sheekaystaa sayidka. Taksigooda korontada ah waxaa la qaadaa laba jeer maalintii, tanina waa lacag-qaadis iyo soo-saaris heer sare ah. Wareeggu waa 2 jeer maalintii, tirada wareegyaduna waa 3 sano. 2*365*3 = 2190 jeer. Tirada wareegyada ee lithium birta fosfooraska birtawaa 2000 jeer, oo tirada wareegyada lama gaari karo kadib taxane badan iyo isku xirnaanta isbarbar socda ee baabuurta korontada. Haddii batteriga laga saaray baabuurka korontada ka dib 3 sano oo hawlgal ah uu leeyahay nolol wareeg ah in ka badan 2,000 jeer, iyo marka laga eego sifooyinka kiimikada u gaarka ah, nolosha la adeegsan karo lama dammaanad qaadi karo. Tani waa sababta aysan wax soo saaraha batterigu ugu dhiirranaynin inuu tan sameeyo. Sababta batterigu u aado dammaanadda.
Nalalka jidadka cadceedda ayaa badiyaa loo adeegsadaa qalabyada kaabayaasha qaranka, oo leh sifooyin injineernimo, u adeegidda dadyowga, oo la xiriira nolosha dhabta ah ee dadka, sidaa darteed isku halaynta, badbaadada iyo deggenaanshaha badeecadaha ayaa aad u baahan. Oo baytariyada duugoobay ayaa loo adeegsadaa nalalka waddooyinka cadceedda kuwaas oo u adeega dadweynaha, waxaana jira halis weyn oo xagga ammaanka ah. Batariga duugoobay laftiisu wuxuu leeyahay khataro waaweyn oo qarsoon, sababtoo ah baytariga duugoobay laftiisu wuxuu dhaafay kharash dheer iyo wareegga dheecaanka, oo noloshiisii ​​iyo astaamihiisii ​​kiimikadu mar dambe lama dammaanad qaadayo. Waxay la mid tahay qof qalliin lagu sameeyay wadnaha oo ay tahay inuu u oggolaado inuu muddo dheer ordo Waxaa laga yaabaa inuusan wax dhibaato ah qabin, laakiin halista ayaa aad u sareysa. Si kastaba ha ahaatee, sida wax soo saarka mashaariicda kaabayaasha, nalalka waddooyinka qoraxda waa wax aan la aqbali karin. Tani waxay la xiriirtaa nolosha iyo badbaadada dadka badan.
Kuweena iftiinka waddada cadceedda waxaa la isticmaalaa batari lithium oo fasal ah, wuxuu socon karaa 3-5 maalmood oo roobab leh oo leh resutlt lumen wanaagsan